Diiwaanka Hawl wadeenada Beesha ee Isbaanishka | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Diiwaanka Hawl wadeenada Beesha ee Isbaanishka
Adduunyada maanta la isku-daray waxay ku badan yihiin howlaha ganacsiga taas oo lagu sameeyo abuurista a Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha. Laakiin maxay yihiin diiwaanada noocaas ah? Xaalado noocee ah ayaa lagu fuliyaa? Sideese loo fuliyaa la-tashiga howlgalada la sheegay?
Qoraalka soo socda waxaan kaga jawaabi doonnaa su'aalahan si aan u kala caddeyno sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah shakiga ka dhalan kara diiwaangelinta hawlwadeennada bulshada.
Aynu bilowno inaan jawaab deg deg ah ka bixinno su'aalaha ugu waaweyn ee ka soo baxa mowduuca, marka hore Yaa weligiis ku jiri doona diiwaanka howlaha bulshada dhexdeeda? Jawaabtu waa: Shirkadaha Isbaanishka ama kuwa madaxbanaan ee la shaqeeya Yurub. Su’aasha labaad waxay noqon doontaa goorma ayaa la soo saarayaa diiwaanadan? Markaad wax ganacsi ah ka fuliso meel ka baxsan Isbaanishka, tani waxay tusinaysaa inaad alaab-qeybiyeyaal ama macaamiil ku leedahay dalka dibaddiisa.
Waxyaabaha soo socda ee lagu caddeeyo waa qof kasta oo dhaqdhaqaaq dhaqaale ku leh meel ka baxsan Spain wuxuu ku xiran yahay inuu gabi ahaanba u hoggaansamo qaar waajibaadka cashuurta. Halkaas ayay ku jirtaa muhiimadda arrintani leedahay, habraacyada maamul ee ay tahay in la fuliyo iyo mas'uuliyadaha maaliyadeed ee aan qabanno hoos ayaa lagu sharxi doonaa.
1 Waa maxay iyo sida loo helo NIF - VAT
2 Samee nidaamka helitaanka NIF - VAT
3 3 fursadaha markaad kujirto diiwaanka hawl wadeenada bulshada dhexdeeda
4 Nidaamka labaad ee maamulka: soo bandhigida foomka 349
5 Weydiinta ka socota bulshada dhexdeeda
6 Is-tashi wadatashi oo ku saabsan diiwaangelinta bulshada dhexdeeda
Waa maxay iyo sida loo helo NIF - VAT
Habka loo marayo kaas oo lagu dari doono diiwanka ka dhex shaqeeya bulshada dhexdeeda ee Isbaanishka. Mawduuca labaad ee aan ka hadli doono wuxuu noqon doonaa soo bandhigida tusaalaha 349. Mar dambe waxaan la macaamili doonnaa mowduucyada noocyada wadatashiga ka dhex shaqeeya bulshada dhexdeeda iyo sida loo sameeyo weydiimaha noocan oo kale ah.
Samee nidaamka helitaanka NIF - VAT
Mid ka mid ah shuruudaha ugu horeeya si markaa ka shirkad ahaan ama dad ahaanba aan u iibsan karno ama u iibin karno wax soo saarka iyo adeegyada ka imanaya waddan ka tirsan Midowga Yurub waa inaan helno NIF - VAT; Waqtigan xaadirka ah waxaa muhiim ah in la caddeeyo in NIF ay la jaanqaadayso DNI-gaaga iyadoo la adeegsanayo "ES" bilowga, si loo caddeeyo inay tahay a Isbaanishka ka shaqeeya bulshada dhexdeeda.
Waa inaan soo bandhignaa howsha horteeda Khasnadda, oo aan codsan doonno inaan ka diiwaangelino gudaha Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha. Samaynta diiwaangelintu waxay noo oggolaan doontaa in loo diiwaangaliyo sidii qof iskaa u shaqeysta ama shirkad iibinaysa ama wax ka iibsanaysa qof ka baxsan Spain, illaa iyo inta ay ka tahay Midowga Yurub.
Qaabka aan howshan ugu bilaabayno waa adigoo soo gudbiya a model 036 (Waa in la caddeeyaa inaysan noqon karin 037 maadaama aan dooneyno inaan iska diiwaangelino waxqabadyo dhaqaale oo ka baxsan Isbaanishka) marka aan buuxino dukumiintigan waa inaan u soo bandhignaa Khasnadda.
Kadib gudbinta arjigayaga diiwaangelinta, Khasnadda ayaa na siin doonta jawaab qoraal ah, oo muujinaysa haddii naloo ogolaaday iyo in kale ka dhex shaqeeya bulshada dhexdeeda. Waxa ugu caansan ayaa ah in jawaabta ay tahay xaqiiqo. Marka la aqbalo aqbalaada codsigeena, waxaan ku dhex jiri doonnaa Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha.
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo, hoosta, maxay yihiin dhammaan fursadaha ka diiwaangashan Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha.
3 fursadaha markii aad ku jirtay Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha
Suurtagalnimada ugu horeysa, iyo mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, waa inay ahaato gudaha Nidaamka VIES. Nidaamkan Maaliyaddu wuxuu ina siinayaa awood aan ku xakameyno cidda aan la leenahay xiriir ganacsi, annaga oo ogaaneyna haddii alaab-qeybiyeheenna ama macmiilkeennu u karti u leeyahay inay ka qabtaan howlo dhaqaale dalal kala duwan.
Faa'iidadaani waxay noo oggolaaneysaa inaan si weyn u xakameyno dhaqdhaqaaqyadeena dhaqaale ee ka baxsan Isbaanishka, maxaa yeelay markaad ganacsi la sameyneyso wariyeyaal ama shirkado ka diiwaangashan gudaha Nidaamka VIES, ka dhaafida VAT ayaa la sameyn karaa taasi waxay ku dhex jirtaa qaansheegtayada. Ka dhigista natiijooyinka maamul iyo dhaqaale mid aad u wanaagsan oo fudud.
Suurtagalnimada labaad ee kujirida diiwankan ayaa ina siineysa waa xaqiijinta qaansheegta macaamiisheenna reer yurub, qaansheegta aan VAT lahayn, sababta tanina waa iibka bulshada dhexdeeda ah oo aan la socon VAT-ka Spain, taas lidkeed , Waxay ka diiwaan gashan doonaan VAT-ka wadanka uu macmiilkiisu ka diiwaan gashan yahay.
Waxyaabaha kor ku xusan waxaa lagu soo koobay xaqiiqda ah, haddii qaansheegteennu loogu talagalay macmiil sidoo kale ku jira Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha, iibiyaha, iibku waa hawlgal laga dhaafay VAT
Suurtagalnimada kale ee ka diiwaangalinta nidaamkan waxay na siineysaa inaan ka helno qaansheegad bixiyeyaashayada Midowga Yurub. Faa'iidada ugu weyn ee tan ayaa ah in badeecaduhu ay aad uga jaban doonaan innaga oo naga badbaadinaya VAT.
Halkan su'aasha soo socota ayaa ka dhalan karta:Haddii aanan ka diiwaangashanayn nidaamka VIES Waxaad ka iibsan kartaa ama ka iibin kartaa alaabada Midowga Yurub. Jawaabtuna waxay tahay, hadday suuroggal tahay, hase yeeshe, dhammaan dhaqdhaqaaqyada waxaa lagu sameyn doonaa VAT-ka waddanka u dhigma, marka macaamillada ayaa qaali noqon doona.
Nidaamka labaad ee maamulka: soo bandhigida foomka 349
Tusaale 349 Waa qaab kaas oo lagu caddeeyo dhammaan iibsiyada iyo iibka laga sameeyay meel ka baxsan Spain, macaamiil ama alaab-qeybiye ka tirsan Midowga Yurub. Foomkaan waxaan kuheleynaa soo koobida howlahayada bulshada dhexdeeda ah.
Waa muhiim in la xuso in qaabkani muhiimad weyn u leeyahay cashuur celinta, oo haddii aad doorato inaadan soo gudbin foomka la sheegay, waxaad u qalmi kartaa cunaqabateyn ka timaadda dhismaha. Intaa waxaa dheer, soo bandhigisteeda waxay na siineysaa faa iidada aan ku kala saari karno dhammaan macaamillada aan sameyn karno oo sidan ayaan ku gaari karnaa go'aannada mustaqbalka ee ku saabsan shirkadeena.
Foomkan waxaad ku arki doontaa dhammaan macaamilladayada laga fuliyay gudaha iyo kuwa lala fuliyay macmiil ama alaab-qeybiye Midowga Yurub. Diiwaangelintuna waxay kadhigeysaa bixinta canshuuraha mid aad u fudud.
Weydiinta ka socota bulshada dhexdeeda
Wax aad muhiim u ah in maskaxda lagu hayo ayaa ah inaan fulin karno weydiimaha qaarkood ee nidaamka VIES, tan si loo helo macluumaad ku filan oo awood u leh in aan go'aanno sax ah ka gaarno shirkaddayada ama waxqabadkeena dhaqaale ee gobolka.
Waxaan marka hore falanqeyn doonnaa weydiinta hawl wadeennada bulshada dhexdeeda ee Isbaanishka. Si loo fuliyo weydiintan, macluumaadka ay tahay inaan helno waa NIF - VAT ee ka dhex shaqeeya bulshada dhexdeeda. Marka aan helno macluumaadkan waxaan gali karnaa nidaamka VIES oo waxaan gali karnaa NIF. Ujeedada weydiintan waa in lagu xaqiijiyo inaad ku diiwaangashan tahay nidaamka. Weydiintan waxaa si isdaba joog ah u adeegsada shirkadaha ama kuwa madaxbanaan ee ka socda wadamada kale ee Midowga Yurub kuwaasoo doonaya inay xaqiijiyaan in alaab-qeybiye ama macmiil ka diiwaan gashan yahay nidaamkan.
Su'aal kale oo la samayn karo ayaa ah tan ka shaqeeya bulshada dhexdeeda oo aan Isbaanish ahayn. Si loo fuliyo weydiintan, macluumaadka loo baahan yahay waa NIF - VAT iyo shahaado elektaroonig ah, sidoo kale waa inaan doorannaa lambarka waddanka (labada xarfood ee ugu horreeya NIF - VAT)
Waa in la ogaadaa in weydiintan si toos ah loogu sameeyo nidaamka waddanka ee uu lambarku soo galay u dhigmo. Marka weydiinta la sameeyo, shaashadda ayaa na tusi doonta farriin tilmaamaysa in hay'adda canshuuraha ay caddeynayso in NIF - VAT ay tahay ama aysan u muuqan wadaha bulshada.
Sameynta baaritaankaan marka la xulanayo alaab-qeybiyeyaashayadu si gaar ah ayey faa'iido u leeyihiin, maadaama ay na siineyso dhowr faa'iidooyin canshuur. Waxayna sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan si wanaagsan u xakameyno macaamillada aan la leenahay macaamiisheenna ama alaab-qeybiyeyaasha ka tirsan Midowga Yurub.
Is tashi ee Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha
Wadatashiga ugu dambeeya ee aan la macaamili doono waa is-tashiga, taas oo ah, innaga lafteena waxaan dooneynaa inaan hubino heerka aan ka joogno nidaamka VIES. Si loo fuliyo la-tashigaan waxaan u baahanahay NIF - VAT iyo sidoo kale shahaado elektaroonig ah oo laga helo codsadaha. Weydiintan badanaa waxaa loo sameeyaa si loola socdo xaalada aan ku dhex jirno nidaamka.
Waqtiga la sameynayo weydiinta, waa inaan galnaa lambarka VAT sanduuqa loogu talagalay tan, fariinta wax soo saarkuna waxay noqon doontaa macluumaadkeena oo lagu muujiyey in hay'adda canshuuraha ay leedahay lambarkayaga oo ah hawl wadeen bulshada dhexdeeda ah.
Macluumaadkan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inaan isku soo bandhigno inaan nahay madax banaan ama shirkad diyaar u ah inay awood u yeelato soo saarida ama helitaanka qaansheegadka qaab cashuurta lagu sheegay. Waxayna noo oggolaaneysaa inaan helno fursado ganacsi oo wanaagsan
Inkasta oo maamulka qaansheegtayada gudahood Diiwaangelinta Wada-hawlgalayaasha Wada-hawlgalayaasha Ma aha arrin fudud in la fuliyo, runta ayaa ah in ay mudan tahay in fiiro gaar ah loo yeesho si loo xaqiijiyo laba shay, macaamil ka fudud oo lala yeesho hawlwadeennada kale ee ka tirsan Midowga Yurub, iyo tan labaad, soo celinta canshuurta saxda ah ee khasnadda .
Mid ka mid ah talooyinka mudan in laga fiirsado ayaa ah in loo adeegsado softiweer takhasus u leh xaqiijinta qaansheegtyada, qaabkan waxaan uga fogaan karnaa khaladaadka suurtagalka ah ee canshuur celintayada waxayna noo oggolaan doontaa inaan ku maamulno xisaabteenna qaab aad u fudud, marka lagu daro soo bandhigida faa iidooyin dheeri ah adoo noo ogolaanaya inaan diirada saarno koritaanka shirkadeena, sameynta go'aano ku saleysan falanqaynta macluumaadka lagu soo bandhigay barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Siyaasadda Maaliyadeed » Diiwaanka Hawl wadeenada Beesha ee Isbaanishka
Sidee ayuu go'aanka Maxkamadda Sare u saameynayaa amaahda guryaha?